musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Dzvanya apa kana iri pepanhau rako! » Ontario Vanamukoti: Kunetseka Kwemakuva paChirongwa Chitsva chekuvhurazve
Hurumende yeOntario iri kukanda chenjedzo kumhepo uye kuisa panjodzi budiriro yakaitwa nedunhu mukuchengetedza kupararira kwehutachiona hwe COVID-19.
Registered Nurses 'Association yeOntario (RNAO) inoti kugona kwepurovhinzi kudzora kupararira kwehutachiona patinenge tichipinda mumwedzi inotonhora kuri kubhejerwa nehurongwa hwekuvhurazve hunosimudza miganho yekugona seMuvhuro, Gumiguru 25, uye inopedza matanho ehutano eruzhinji - kusanganisira kuda humbowo hwejekiseni - kutanga kwaNdira.
RNAO iri kunetsekawo zvakanyanya kuti hurumende yakasarudza kusazivisa nhomba yekudzivirira vachengeti vezvehutano munzvimbo dzese. Iri rairo ratovepo kune avo vanoshanda mukuchengetwa kwenguva refu, riine nguva yakatarwa yekuteera naNovember 15. Zvipatara zvakawanda zvekuchengetedza zvakanyanya zviri kutora matanho akafanana. Nekudaro, iyi nzira yepatchwork kune mutemo nehurumende yeFord inosiya varwere nevashandi muzvipatara zvizhinji, kuchengetwa mudzimba uye mamwe marongero enharaunda pane yakanyanya njodzi yekukanganiswa kana vashandi vasina kubayiwa vakasiya imwe nzira kune imwe ine zvinyoro nyoro.
Inoda kuti vese vashandi vezvehutano pamwe nevadzidzisi vanyatsobaiwa hutongo hwakavakirwa pauchapupu, hwakatanga kudaidzwa neRNAO muna Chikunguru 2021, uye ichangotsigirwa neHurumende veSainzi Tafura. Kufuratira zano rakadai kunoshaya pfungwa, kusava nehanya uye kunokanganisa kutarisirwa kwevarwere uye kuchengetedzeka kwevashandi.
RNAO inokurudzira vanhu kuti varambe vachisaina Action Alert yavo vachida kuti Mutungamiri Ford awedzere majekiseni anofanirwa kuvashandi vezvehutano pamwe nevadzidzisi uye vagadzire nzvimbo dzakakomberedza nzvimbo dzavanoshandira. Sangano rinotaura kuti aya matanho akakosha anodiwa kutarisana neCOVID-19 musoro.